Keating oo Biixi ku adkeeyay inaan laga gudbin 5 qodob oo muhiim u ah wada shaqeynta (Akhriso) | Arrimaha Bulshada
Home News Keating oo Biixi ku adkeeyay inaan laga gudbin 5 qodob oo muhiim u ah wada shaqeynta (Akhriso)
Keating oo Biixi ku adkeeyay inaan laga gudbin 5 qodob oo muhiim u ah wada shaqeynta (Akhriso)
Bulsha:- Sida aan wararkeena hore ku sheegnay waxaa magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland gaaray Ergeyga gaarka ah ee QM u qaabilsan arrimaha Somalia Micheal Keating.
Socdaalka Keating ee magaalada Hargeysa ayaa ku saleysnaa dajinta xeer hoosaadka ay kuwada shaqeynkaraan QM iyo maamulka cusub ee uu Hogaaminaayo Muuse Biixi.
Keating, ayaa Biixi u sheegay inay ahmiyad u arkaan in la dhowro xeer hoosaadka ay kuwada shaqeyn jireen QM iyo maamulkii hore ee Siilaanyo waxa uuna sheegay inay sii socon doonto wada shaqeynta.
Keating, waxa uu Muuse Bixi u sheegay in laga doonaayo ilaalinta xeerka wada shaqeyneed iyo in Beesha Caalamka ay Somaliland u ictiraafsan tahay maamul ka tirsan Somalia, sida maamulada kale oo ay kamid tahay Puntland, Galmudug iyo Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo HirShabelle.
Keating, waxa uu Mr Biixi u sheegay in ujeedka ugu weyn ee socdaalkiisa Hargeysa uu yahay in maamulka cusub loo dulmaro qodobada sharciga ah, markii laga soo tago rabitaanka gaarka ah.
Keating, waxa uu Muuse Biixi xusuusiyay inay mudan tahay inaan la faragalin qodobada kala ah:
1-Deeqaha DFS ay u qoondeyso maamulka Somaliland si lamid ah deeqaha la siiyo maamulada kale.
2-In hawada Somalia laga sii maamuli doono magaalada Muqdisho isla markaana Somaliland laga doonaayo in wixii maamulka Hawada ah ay ku feesho DF.
3-Dhowrista wada shaqeynta maamulka kala dhexeysa QM.
4-In maamulka cusub ee Somaliland uu maanka ku hayo in adduunka uu u ictiraafsan yahay inay raacsan yihiin Somalia inteeda kale, markii leyskala soo tago rabitaanka gaarka ah.
5-Ilaalinta degnaanshiyaha iyo Nabada labada dhinac, iyadoo wixii soo kordhaa ay dib ugu soo laaban doonaan QM.
Ergeyga QM Keating waxa kale oo uu ka hadlay doorka kaga aadan dagaalkii Somaliland iyo Puntland ku dhex maray deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool, isagoo sheegay in xalka arrintaasi aanu ku jirin iska hor imaad ciidan hase ahaatee ay isku dayayaan sidii loo yarayn lahaa xiisadda u dhaxaysa labada dhinaca.
Dhinaca kale, Hogaamiyaha maamulka Somaliland Muuse Biixi ayaa Keating u sheegay inay kawada xiriiri doonaan wixii dheeri ah si looga gaashaanto dhibaatooyin soo laalaabta.